Global Voices teny Malagasy » Zimbaboe: Fihaonana tamin’ny mpitoraka bilaogy sy poety Zimbaboeana, Mcgini Nyoni · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Febroary 2011 16:43 GMT 1	 · Mpanoratra Pamela Mutamba Nandika miora
Sokajy: Zimbaboe, Haisoratra, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia
Mamela ny dindony eo amin'ny tontolon'ny bilaogy sy ireo fitaovana media sosialy hafa ny Zimbaboeana. Ilay Zimbaboeana mpitoraka bilaogy, poety, mpanoratra tantara an-tsehatra sady mpampianatra , Mcgini Nyoni , dia tsy mivoana amin'izany. Mcgini dia Filoha Mpamorona ny tetikasa Poezy Bulawayo . Ity misy fanadihadiana avy amin'ny mailaka nifanaovako taminy.
Q: Afaka milaza ny mombamomba anao fohifohy ve ianao?
Nanomboka nitoraka bilaogy aho tamin'ny Septambra 2009 taorian'ny fiofanana niarahako tamin'i Ivor Hartman  tamin'ny fankalazana ny Intwasa. Mamelona ny bilaogy Storytime  izy ary tao anatin'io fiofanana io dia nanokafany ny masonay tamin'ny fahafahanay manana vohikala maimaim-poana (ny bilaogy dia vohikala tokoa); zavatra izay tsy noeritreretinay ho azo tanterahana.
Q: Lazao anay bebe kokoa ny mikasika ny zavatra soratanao
Ny bilaogy Ny poezy Bulawayo  dia famoahana ireo poezy amin'ny aterineto ary ity no bilaogy ho resahiko manokana ato amin”ity fanadihadiana ity. Manoratra lahatsoratra fanehoan-kevitra  ihany koa aho izay matetika mikasika ny olana eo amin'ny fitondrana ao amin'ny bilaogy Kubatana. 
Q: Inona no toeranao ao amin'ny Poezy Bulawayo?
Nila toerana hasiana ireo poeziko ireo aho ary ireo Poety miara-miasa amiko ihany koa dia mila toerana hamoahana ny asany. Ny bilaogy
poetrybulawayo.blogspot.com dia mamoaka ireo poezy eran-tany ary ny zavatra nisongadina indrindra amin'izao dia ny antolojian'ny poezy DAYBREAK  izay hita ao amin'ny UNIBOOK.
Ny bilaogy Poetry Bulawayo dia niforona taorian'ny nahafantarana fa tsy liana amin'ny famoahana poezy ireo mpanonta fototra satria matetika dia tsy mateza izany. Lasan'ireo izay revom-pitiavana hampiroborobo azy izany.
Q: Inona ireo sakantsakana tena misakana ireo olon-tsotra na fikambanana amin'ny fampiasana ireo fitaovana media sosialy ao amin'ny firenena?
Ny tena olana amin'ny fitorahana bilaogy aty Zimbaboe dia ny fidirana voafetra amin'ny aterineto sy ny solosaina. Voatery mamoaka ireo zava-baovao ao amin'ity bilaogy ity any amin'ny trano fisotroan-kafe misy aterineto aho, izay tsy dia tsara loatra. Rehefa mitoraka bilaogy ianao dia mila fikirizana izay tsy dia vita loatra aty Zimbaboe. Ny olana hafa ihany koa dia tsy maro ireo zimbaboeana no mampiasa aterineto, noho izany dia maro amin'ireo mpanaraka ny vohikala no avy any ivelany. Na dia raisina an-kafaliana aza ireo vahiny ireo, dia tianay koa ny hitombon'ireo mpamaky eto an-toerana.
Q: Ahoana ny hoavin'ny fitorahana bilaogy any Zimbaboe?
Mihamitombo dia mihamitombo ireo vahoaka manomboka mitoraka bilaogy aty Zimbaboe, fa mbola ho elaela vao ho lasa fitaovana fifandraisana fanolo izany. Fa ho tonga amin'izay ihany izahay.
Pamela: Misaotra nahafoy fotoana
Tsy misy tokony hisaoranao
Ity ny iray amin'ireo poezian'i Mcgini antsoina hoe State Witness .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/02/12/12725/
 Poezy Bulawayo: http://www.poetrybulawayo.blogspot.com
 bilaogy Storytime: http://publishyourstory.blogspot.com/
 Ny poezy Bulawayo: http://poetrybulawayo.blogspot.com/
 Manoratra lahatsoratra fanehoan-kevitra: http://www.kubatanablogs.net/kubatana/?author=27
 bilaogy Kubatana.: http://www.kubatanablogs.net/kubatana